योगेशले साथीलाई लगाएको ‘गुण’: नारायणहिटीदेखि नेवानीसम्म ‘बुलेटप्रुफ’ भ्रष्टाचार
हाल नारायणहिटी सङ्ग्रहालयमा रेस्टुरेन्ट बनाउँदै गरेको बतास समूहका कार्यकारी अधिकृत थिए
पुस २१, २०७८ १:४४
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। हाल नारायणहिटी सङ्ग्रहालयमा रेस्टुरेन्ट बनाउँदै गरेको बतास समूहका कार्यकारी अधिकृत थिए डिम प्रकाश पौडेल, योगेश भट्टराईका नजिकका मित्र पौडेललाई नेपाल वायुसेवा निगममा सञ्चालक बनाएर ल्याइयो ।
केही महिनापछि उनलाई वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धकको जिम्मेबारी दिइयो, जबकि व्यावसायिक रूपमा जीवनमरणको लड़ाइँ लडिरहेको निगमलाई सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ या अनुभवी निर्देशक आवश्यक थियो ।
सरकारी स्वामित्वको वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिमा निजी क्षेत्रबाट ‘यति’ समूहका दुई जना सदस्य छन्, फुरगेल्जे शेर्पा र ईश्वरी पौडेल ! नेपाल वायुसेवा निगमसँग यति एयरलाइन्सको घरेलुदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म प्रतिष्पर्धा छ र त्यसको बोर्डमा प्रत्यक्ष स्वार्थ बाझिने गरी यति समूहकै मान्छे राखिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विदेश भ्रमण जाँदा निगमको जहाजको साटो यति एयरलाइन्सकै लगानी रहेको हिमालय एयरलाइन्सको जहाज चार्टर गर्ने गरेको समाचार पढ्नुभएकै होला । निगमको वाइडबड़ी अनियमिततामा नाम मुछिएका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी सरकारी टोली लिएर ताप्लेजुङ्गको चुहानडाँडा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पुगेका थिए । तर त्यो सरकारी टोलीमा प्रत्यक्ष स्वार्थ बाझिने गरी किन र कसरी ‘यति’ एयरलाइन्सका अध्यक्ष पनि सहभागी थिए भन्ने प्रश्न आजसम्म अनुत्तरित नै छ ।
भ्रष्टाचारका जरा हामीले सोचे भन्दा धेरै गहिरा छन् । पेट्रोलमा पाँच रुपियाँ बढ़ाउँछन् । आन्दोलन हुन्छ अनि एक रुपियाँ घटाउँछन् । हामी जनप्रिय सरकारलाई ताली बजाउँछौं । ४ रुपियाँ पास हुन्छ । बतासले रेस्टुरेन्ट पाएन भने पनि हुने यस्तै यस्तै हो ।
एउटा व्यक्ति, एउटा पार्टी, एउटा संस्था या एउटा घटना खराब भए पो लौ समातियो भन्नु र खुशी हुनु ! तैपनि सानै होला, तर आजको युगमा सोसल मिडिया पनि एउटा ताकत भने हो । बोल्न र खबरदारी गर्न नछोडौं !